रबि भन्छन् – टन्न घुस खाएर राजनीति गर्नु भनेको शहिदको रगत पिउनु र मासु लुछ्नु जस्तै हो « News24 : Premium News Channel
रबि भन्छन् – टन्न घुस खाएर राजनीति गर्नु भनेको शहिदको रगत पिउनु र मासु लुछ्नु जस्तै हो
Posted By News24Nepal.TV || Date: 10 September, 2017
विपी जयन्तको प्रसंगमा आज केही भनौँ । नेपाली राजनीतिका एक युग पुरुष आदरणीय विपी कोइरालालाई हरेक बर्ष झै आज पनि श्रद्वाञ्जली अपर्ण गरीयो । नेपाली कांग्रेस सम्बद्व राजनीतिज्ञ र सर्वसाधारणले मात्र होइन,अन्य दल र अन्य राजनितिक आस्था राख्ने समेतले आज विपीलाई सम्झिए ।
बर्षको यो एक दिन विपीको महिमा गाउन प्राय कसैले छुटाउँदैनन् । बिपी यस्ता थिए , बिपी उस्ता थिए, विपीले यसो गर्नुभयो , उसो गर्नुभयो ,यसो भन्नु हुन्थ्यो, उसो भन्नुहुन्थ्यो जस्ता अभिव्यक्तिले आज दिनभर चर्चा पायो र ठिक एक बर्षका लागि विपीलाई थान्को लगाइयो । विपीलाई साँच्चै आदर्श मान्नुहुने र विपी कोइरालालाई एक महान राजनीतिज्ञ मान्नु हुने नेता ज्युहरु, विपी कस्तो हुनु हुन्थ्यो भनेर भन्न छाडिदिनुस , तपाई कस्तो हुनुहुन्छ त्यो हेर्नुस ।विपीले के गर्नुभयो भनेर महिमा गाउन छाडीदिनुस, तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो नियाली हेर्नुस ।
एक आदर्श राजनीतिज्ञको नाम र फोटो प्रयोग गरेर निम्न स्तरको राजनीति गर्नु भनेको एक निष्ठावान आत्मालाई मरेर गइसकेपछि पनि रुवाउनु हो । आज विपीलाई सम्झने सबै दलका नेताहरुले दिएको श्रद्वाञ्जली र श्रद्वाञ्जलीमा चढाईएको फुलले स्वर्गीय विपी कोइरालाई काँडा बनेर घोच्यो होला । उनको नाम र आदर्शको नाममा पैसा कमाउने राजनीति गर्नेहरुले श्रद्धान्जलीमा जति ठुलो माला चढाएपनि त्यसको कुनै महत्व हुने छैन । आफ्नो जीवनमा विपीको सिद्वान्त,मुल्य,मान्यता र आदर्शलाई लागु गर्न नसक्नेले विपीलाई श्रद्वाञ्जली दिएको सुहाएको छैन । बरु निष्ठा र आदर्शको राजनीति गर्ने औलामा गन्न सकिनेहरुले विपी,पुष्पलाल र विर शहीदहरुलाई जीवीत पारेका छन् । टन्न घुस खाएर राजनीति गर्नु भनेको शहिदको रगत पिउनु र मासु लुछ्नु जस्तै हो ।
महिलाहरूकाे लागि विशेष साउन महिना : शिवकाे व्रत, हरियाे चुरा र मेहन्दी किन ?
सत्य निरुपणका नाममा ४५ करोड स्वाहाः उजुरीको चाङ, परिणाम शून्य
चार सुपर-स्टारको बाल्यकालदेखिको फुटबल यात्रा, कसरी बने महान् खेलाडी ?
आलेख: डाक्टर बन्न छोडेर हिमाल खोज्दै हिँडे आङछिरिङ शेर्पा
वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन नगरे सुरक्षित रहन्नन् परिवारहरू
‘पानीजहाजका कुरा गर्नेमाथि साइबर क्राइम लाउनुपर्छ’ भन्ने माननीय महेश बस्नेतलार्इ खुलापत्र
थाङपाल गाउपालिकाको पाँचपोखरीमा मेगा बैंकको सयौं शाखा